Joogtaynta - Filter Tech
UU ABUURO ECOHOME
Annaga oo wajahayna dhibaatada sii kordheysa ee biyaha ee ka imaaneysa isbeddelada cimilada degdegga ah iyo kobaca dhaqaalaha, weli waxaan rajo ka qabnaa mustaqbalka maadaama aan ku kalsoonahay in aan dad badan u keenno khibrad biyo iyo caafimaad leh annaga oo ku sii soconeyna kaamil ahaanta wax soo saar kasta.
Waxaan ka taxaddarnaa samaqabka shaqaalaha annaga oo taageerna dheelitirka nolosha-shaqada iyo bixinta taageerada caafimaadka maskaxda sida la-talinta cilmu-nafsiga, maxaa yeelay waxay daryeelaan dadka adduunka ugu qiimaha badan: lamaanayaasheena.
Waxaan isu xilsaarnay hawsha dib u soo celinta iyo wax u qabashada bulshada iyo bulshada iyada oo loo marayo kaalmada dadweynaha ee hay'adaha samafalka maxalliga ah sida ku-deeqiddayada xilliyada masiibada masiibada ah ee COVID-19 dillaacay.
Wax kasta oo aan sameyno, waxaan ku sameynaa iyada oo maskaxda lagu hayo deegaanka. Sida shirkad bixisa barakada biyaha, waxaan soo dhaweyneynaa is-waafajinta dabeecadda, markasta waxaan ku dhegannahay fikradda ganacsi ee koritaanka waarta iyo daryeelka meeraha.
Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican, Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda, Kaydadka Beddelaha Filterka Biyaha, Sifeeyaha Biyaha Guriga Oo Dhan, Sifeeyaha Biyaha Gudaha, Isticmaalayaasha Daaweynta Biyaha,